दुर्लभ संयोगको दिन आमलकी एकादशी, अमलाको रुखमा भगवान विष्णुको बास ! « Online Tv Nepal
दुर्लभ संयोगको दिन आमलकी एकादशी, अमलाको रुखमा भगवान विष्णुको बास !
Published :7March, 2020 11:16 am
हिन्दू पञ्चाङ्ग अनुसार महिनाको दुई पटक आउने एघारौं तिथिलाई एकादशी भनिन्छ । फाल्गुन शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीलाई आमलकी एकादशी भनिन्छ । आमलकी भन्नाले अमला नाम गरेको जंगली वनष्पतिलाई जनाउँदछ । आमलकी एकादशीका दिन अमलाको वृक्षलाई भगवान् बिष्णुको रुप सम्झेर पूजा गरिन्छ । त्यहि भएर हिन्दू परम्परामा आमलकी एकादशीको पनि अन्य एकादशीझैं विशेष महत्व छ । बिष्णु पुराणमा उल्लेख भए अनुसार भगवान् बिष्णुले थुक्ने क्रममा वहाँको दिव्य मुखभित्रबाट चन्द्रमाझैं देखिने एउटा आकृति प्रकट भयो । उक्त चन्द्रबिन्दु आकाशलोक हुँदै पृथ्वीमा झर्यो ।
￼आमलकी एकादशी व्रतको प्रभावले समस्त पापहरु नाश हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । यस एकादशी व्रत गर्नाले एकसय गाई दान गरेसरह फल प्राप्त हुने बताइएको छ । भगवान् श्री बिष्णुको मुखबाट उत्पति भएको अमलाको रुखको पूजा गर्नाले विशेष धार्मिक फल प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता छ । विभिन्न कारणले आमलकी एकादशीको व्रत बस्न नसकेका व्यक्तिहरुले यस एकादशीको स्मरण मात्रै गरे पनि पुण्य प्राप्त हुनेछ । भगवान् बिष्णुलाई समेत अत्याधिक प्रिय लाग्ने अमला खाँदा तीन गुणा धेरै शुभ फल प्राप्ति हुने शास्त्रिय भनाई छ । खासमा स्वर्ग र मोक्ष फलका लागि आमलकी एकादशीको व्रत बस्नु उचित मानिएको छ ।